Fandraisana amin'ny alàlan'ny rahona vita amin'ny rahona | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Content Creation » Fitahirizana ireo alàlan'ny workflows vita amin'ny rahona
Ny fipoahan'ny COVID-19 dia niteraka ny fanafoanana ny 2020 Kat Show ho toy ny hetsika ara-batana any Las Vegas. Fa kosa, ireo mpivarotra isan-karazany izay te hanana fampirantiana sy naseho amin'ny rafitra fitahirizana nomerika sy rindrambaiko ho an'ny fampiasa amin'ny haino aman-jery sy fialamboly samihafa dia nifindra tamin'ny Virtual Event, nanomboka tamin'ny faran'ny volana aprily ka hatramin'ny jona 2020, anisan'izany ny Kat Show Express (nabshow.com/express/).
Raha jerena ny hetsika mankany amin'ny toerana lavitra nataon'ny matihanina indostrian'ny indostria maro dia nanjary nisy ifandraisany indrindra ireo làlan-javaboary mifototra amin'ny rahona. Nanafaingana ny fironana amin'ny arofanina miorina amin'ny rahona ny tarika ankehitriny, izay mety hitohy na dia afaka miara-miasa indray isika. Raha tsy misy rahona, ny ankamaroan'ny matihanina M&E dia tsy misy asa.
Niompy amin'ny lazany ny alàlan'ny rahona matevina na dia talohan'ny valan'aretina COVID-19 aza. Nandritra ny taona 2020 HPA Retreat, ny orinasa mpitari-tolotra manolotra safidy fidirana rahona sy mpitantana za-draharaha dia namorona horonantsary fohy miorina amin'ny rahona mivantana. Ilay Very Lederhosen.
Nandritra ny tatitra fanao isan-taona 2019 momba ny fitahirizam-bola nomerika ao amin'ny fampahalalam-baovao sy fialamboly, dia nanantona ny fitomboan'ny rahona ho fanohanana ny media sy fialamboly aho (jereo eto ambany). Ao amin'ny tatitra tamin'ny taona 2020 dia mitombo ny fitomboan'ny fitahirizana rahona noho ny fampitomboana ny fampiasana aorian'ny fiandohan'ny pandrefesana, ary mifototra amin'io traikefa io, ny fivoarana haingana kokoa amin'ny asa lavitra sy ny str awan cloud. Ny valanaretina dia nanararaotra ny fampiasana ny rahona.
Ity lahatsoratra ity dia mijery ny fivoarana ho an'ny arofanina miorina amin'ny rahona, ary indrindra ny vahaolana fitehirizana nomerika hanohanana ireo alàlan'ny alàlan'ny rano ireo. Mariho fa na dia orinasa maro izay te hanana fampiratiana amin'ny 2020 NAB aza no mandray anjara amin'ny hetsika virtoaly, dia miely izany fotoana izany, manomboka amin'ny volana aprily ka hatramin'ny jona 2020. Hiresaka momba ny zavatra hitako tamin'ny fotoana nanoratana aho. .
Ny Internet Web Services (AWS) dia nanana ny hetsika virtoaly NAB azy manokana, mifantoka amin'ny asa lavitra lavitra avy amin'ny famoronana votoaty ary ny famokarana lahatsoratra amin'ny alàlan'ny fizarana.
Maro ny orinasa M&E no nampiasa serivisy AWS anisan'izany i Turner, Untold, the Rock and Roll Hall of Fame, Fox, HBO, Hotstar ary Eurosport. AWS dia iray amin'ireo orinasa 5 nomena mari-pankasitrahana EMMY injeniera ho an'ny famatsiana haino aman-jery Cloud0based ho an'ny fanentanana, fitantanana ary fanaterana.
AWS dia manolotra serivisy telo telo hanampy amin'ny asa fampiasa amin'ny haino aman-jery saro-pady. Ireto avy ireo faritra eo an-toerana AWS, AWS outpost sy AWS haba. Ny zona eo an-toerana dia manome elanelana ambany amin'ny alàlan'ny manatona ny mpampiasa farany anao serivisy AWS. Mitondra kitapom-bokatra AWS ao anaty ivon-drakitrao ny mpiasan'ny AWS raha mahita traikefa amin'ny rahona iray ao anaty premise na any amin'ny rahona. Ny halavan'ny AWS dia ahafahan'ny mpamorona fampiharana finday mametraka fampiharana miaraka amin'ny haben'ny millisecond isa tokana.
AWS dia manolotra fiasana virtoaly ho an'ny Windows na Linux izay ahitana fidirana amin'ny alàlan'ny CPU NVIDIA T4 Tensor Core sy toeram-piasana NVIDIA Quadro amin'ny vidiny mitovy. Izy io koa dia manolotra ny fandefasana ny AWS amin'ny alàlan'ny alàlan'ny rahona feno rahona amin'ny alàlan'ny AWS Thinkbox Deadline na ny vahaolana fitantanana tianao. Samy vokatra atolotra handoa vola ireo rehefa ampiasaina io.
Tamin'ny taona 2019 dia nilaza i Fox fa hampiasa AWS ho an'ny tariby sy zanabolana fandefasana fampiasa amin'ny AWS Outpost amin'ny sasantsasany amin'ny famokarana azy sy ny faritra AWS eo an-toerana. Ny sary eto ambany dia mampiseho ny hoavin'ny fampitana mivantana amin'ny alàlan'ny AWS raha toa ka mihetsika anaty rahona ny efitrano fifehezana ny famokarana.
Niresaka momba ny fizarana votoaty ambany loatra ihany koa ny AWS amin'ny alàlan'ny AWS Elemental MediaStore. Ho an'ny NAB 2020 AWS dia nanolotra famindrana akora Elemental Live, fanohanana DRM ary fampidirana Ad-server amin'ny sisiny. Nilaza ihany koa ny orinasa fa ny Elemental MediaConvert sy Accelerated Transcoding dia afaka manao encoding AV1 sarotra kokoa amin'izao fotoana izao. Ny tarehimarika eto ambany dia maneho ny fomba hanomezan'i AWS Elemental MediaLive, boaty fampiasa amin'ny haino aman-jery an-toerana an-tserasera.
Qumulo dia manome serivisy rakitra rahona fitehirizana sy serivisy serivisy sy serivisy vitsivitsy horonantsary NAB virtoaly. Ny indostrian'ny M&E dia iray amin'ireo Qumulotsenan'ny lasibatra. Nambaran'ity orinasa ity fa ny Adobe Premiere Pro sy After Effect dia mifanaraka amin'ny QumuloNy serivisin'ny rakitra, ahafahan'ny ekipa mamorona mamorona sy manova rakitsary horonantsary mampiasa fitehirizana rahona miaraka amin'ny haavon'ny fampidirana, fidirana ary ny fampiasa ao amin'ny studio. QumuloNy CloudStudio dia mamela ny tetik'asa mifindra izay voafatotra amin'ny fomba maoderina amin'ny tranokala famokarana ara-batana any amin'ny rahona ho an'ny vahoaka eo amin'ny sehatra AWS sy GCP.
Ao anatin'ny famoahana hevitra momba ny mpandinika Qumulo niresaka bebe kokoa momba ny fomba Qumulo, Adobe sy Teradici dia afaka manome ny fanovana miaraka amin'ny hibridan'ny fiaraha-miasa toy ny aseho eto ambany eto. Io fitambaran-javatra io dia afaka nanome scaling tsy misy fetra, fanovana horonantsary fiaraha-miasa amin'ny haingam-pandeha avo lenta, fiantraikany ara-maso ary fandefasana fihoaram-pefy amin'ny alàlan'ny analytics sy visibility Qumulo fitaovana fandalinana.
atsangana hitondra fanatsarana nambara miaraka amin'ny rafi-drakitra StorNext sy ny rindrambaiko fitantanana ny data izay natao hanamboarana ny votoatin'ny rahona ho mora kokoa, miaraka amin'ny famaky sy fanoratana ny hafainganan'ny fivarotana rahona sy zavatra hafa. Ny endri-javatra StorNext 6.4 vaovao dia manampy ny fisian'ny raharaha fampiasana hibridra sy multi-rahona, amin'ny famoahana haingam-pandeha bebe kokoa amin'ny haino aman-jery sy fialamboly ary tontolo iainana hafa.
StorNext 6.4 dia mampiditra zavatra manoritsoritra zavatra manokana hahatonga ny votoatin'ny rahona ho mora hidirana, ahafahan'ny alàlan'ny mpandehandeha hibrida. Ny mpanjifa dia manoratra rakitra ao amin'ny rafitra rakitra StorNext, avy eo mifototra amin'ny politika, mandika ny rakitra StorNext amin'ny rahona publik na tsy miankina manokana, miaraka amin'ny safidy hampiditra metadata zavatra fanampiny. Ny mpanjifa tsy manana StorNext sy ny fizotry ny mponina dia mety miditra amin'ny zavatra mivantana, hampandeha ilay metadata vaovao efa ela. Ankoatr'izay, ny asa / fiasana mametaka be dia be nataon'i StorNext 6.4 dia manome fanatsarana 5X ka hatramin'ny 7X noho ny fiasa tokana.
Manao ny azy ihany ny Netapp hetsika NAB virtoaly tamin'ny 2 jona. Ny hetsika ataon'izy ireo dia hampiseho ny vahaolana, miaraka amin'ireo mpiara-miombona manolotra ambaratonga fahombiazana sy fahombiazana vaovao ary hamorona takelaka fampahalalam-baovao izay manohana ny workflows M&E.
Nanana an'izany koa i Dell Technologies hetsika virtoaly izay naneho ny fitaovam-panangonana sy fitehirizana ny alàlan'ny fantsom-baovao sy fialamboly ary koa ny fihetsiketsehana miaraka amin'ny Adobe miaraka amin'ny tahiry Dell Isilon amin'ny fampandehanana ireo làlana miasa miaraka. Ny horonantsary notakian'izy ireo dia niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fidirana metadata ary ny manam-pahaizana iray momba ny Adobe dia niresaka momba ny fomba nanampian'i Dell Isilon ny fidirana Adobe's Productions (ampahany amin'ny Premiere). Marihina fa tamin'ny 2020, ny orinasa dia manana drafitra ho an'ny mpizara Isilon sy rahona platform miaraka amin'ny OneFS.Next. Nilaza ny orinasa tamin'ny volana aprily fa manantena ny ho afaka hiteny bebe kokoa ao anatin'ny roa volana.
Dell dia manana slide miresaka miresaka momba ny paikadiny voalohany. Ity dia paikadin-kevitra feno ifotony hampihenana ny angona eo anelanelan'ny rahona, ny tsy miankina, ny rahona maro ary ny rahona ho an'ny daholobe.
Mahavita asa be i Dell amin'ny alàlan'ny workflows amin'ny IP-(SMPTE 2110) miaraka amin'ny vokatra. Nandritra ny iray amin'ireo firaketana an-tsoratra ao amin'ny andalana iray dia manam-pahaizana iray avy IABM nanasongadina fa ny matihanina M&E dia nitodika tamin'ny fampiasana arisiva satria nanjary sarotra ny nahazoana hazavana vaovao amin'ireo mpisehatra. Niara-miasa tamin'i Greymeta i Dell mba hanomezana mora ny rakitra voatahiry amin'ny alàlan'ny metadata AI namorona amin'ny sehatra Iris. Ity ambany ity ny endrika iray avy amin'ny fampisehoan-dry zareo on-line izay fijerena sehatra avo lenta momba ny sehatra fitehirizan-tena sy ny tetikasan'ny rindrambaiko Dell.
mazoto nanome loharano an-tserasera amin'ny fanaovana asa M&E lavitra. Marquis Broadcast dia manolotra safidy fiasana lavitra mazoto Ny fitahirizana nexis miaraka amin'ny fitehirizana rahona wasabi (ho an'ny backup) ary ny fiaraha-miasa mifandraika amin'izany.
Spectra Logic dia miorina tsara ao amin'ny orinasa M&E ho mpamatsy fitahirizana arisiva. Amin'ny fanolorana NAB virtoaly mampiseho fampiasa mandroso ho an'ny vavahady fitahirizan-dry zareo BlackPearl izy ireo. Ny BlackPearl no fototry ny tahiry fitahirizam-bokatra Spectra izay ahitana fifandraisana amin'ny rahona sivily sy hibrida, fitahirizana marobe marobe ary koa fitehirizana zavatra vita amin'ny HDD ary fitahirizam-bokin'ny magnetic.
Riobroker, nampidirina tao amin'ny NAB tamin'ny taona 2019 dia milina fanodinana data sy fifandraisana. Io dia ahafahana mampiditra metadata sy manondro index miaraka amin'ny atiny ary manome milina mifindra amin'ny Black Pearl ary fanarenana ampahany amin'ny rakitra. Tafiditra ao anatin'izany ny hetsiky ny angona mankany na avy amin'ny rahona feno vahoaka. Ny fametrahana ny node RioBroker dia azo ampiana hampiakarana ny fananana sy ny fahafaha-manana amin'ny habaka anarana manerantany. Ny StorCycle Spectra dia mamela ny fitantanana manam-pahaizana amin'ny fanananao fitehirizana mifandray rehetra.
Notabi dia nanao M&E ho iray amin'ireo tsenany mifantoka amin'ny fitahirizana rahona ambany vidy ny orinasa. Miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka fantsom-pifandraisana maromaro ny orinasa mba hitahirizana rahona amin'ny ampahany amin'ny tetikasan'izy ireo. Nilaza ny orinasa fa ny 3 rehetrard Ny fangatahana AWS S3-fika mifanentana amin'ny sehatra dia tokony hiasa miaraka amin'ny tahiry Wasabi. Nilaza ny orinasa fa ny 200+ fampiharana dia voatanisa ho toy ny ampiasana Wasabi toy ny hita etsy ambany. Nilaza ny orinasa fa ny fampiasana ny rafitra fisie-namboarina maoderina miaraka amin'ny haitao hardware dia manome ny tahiry exabyte.
Ny orinasa dia manana tohatra tokana mitahiry fitehirizana be amin'ny $ 5.99 / TB / mo tsy misy fihenam-bidy ary tsy misy fiampangana fiantsoana ny API. Tamin'ny 2020, dia nanolotra fitahirizam-bola amin'ny $ 5.99 isam-bolana i Wasabi na fitahirizana tahiry natokana ho an'ny 50 TB ka hatramin'ny 10 PB amin'ny fitomboana maharitra mihoatra ny 1,3 na 5 taona miaraka amin'ny aloa mialoha. Nilaza ny orinasa fa azo antoka ny fitahirizan-tena ary miaraka amin'ny tanjaka sy ny fahazoana ary misy ny fanarahana ny Motion Picture Association of America.
Wasabi manana toeram-piaraha-miasa eo amin'ny 1 Wilshire any LA miaraka amina fitaovana famindram-po 100 an'ny Wasabi Ball ho fametrahana atiny be loatra. Manana orinasa fitehirizana ny morontsiraka amerikanina any Etazonia sy ny any Europe (Amsterdam) ary ny Asia (Japon) koa ny orinasa. Ho fanampin'izany, misokatra ny fifandraisana fifandraisana natokana ho an'ny 1 sy 10 GbE i Wasabi.
Backblaze, orinasa fitehirizana rahona hafa manara-maso ny haben'ny M&E, dia nanambara fa manohana ny ekolojia S3 goavana amin'ny famoahana ny S3 Compatible API vaovao.
Midika izany fa ny mpamorona votoaty dia afaka mifindra mora avy amin'ny mpivarotra fitehirizana rahona hafa mankany amin'ny Backblaze tsy misy vidin'ny B2 rahona mora vidy. Ny fanombohana ny BackBlaze dia tohanan'ny IBM Aspera ho famindrana angon-drakitra haingana sy mandehandeha lavitra eny lavitra atsangana hitondra miasa miaraka amin'ny Backblaze ho an'ny fahazoana, famoronana ary fizarana atiny nomerika. Vao haingana i Backblaze dia nilaza fa manana mihoatra ny Exabyte fitahirizana azy ireo ao anatin'ny rahona.
Object Matrix dia manome fitehirizana zavatra ho an'ny fampitam-baovao sy fialamboly. Nilaza ny orinasa fa "Object Matrix dia mifantoka amin'ny fanomezana vahaolana izay ahafahan'ny ekipa mpamorona sy famokarana manolotra ny tenany amin'ny fidirana amin'ny atiny amin'ny asa na any lavitra na aiza na aiza." Mampiroborobo ny fidirana amin'ny serivisy amin'ny atiny amin'ny serivisy an-tserasera ny fanampiana amin'ny atrikasa M&E lavitra sy fiaraha-miasa.
Editshare nampandeha maimaimpoana hatramin'ny sehatry ny fitantanana ny haino aman-jery lavitra ny Flowst hahafahana manampy amin'ny matihanina matihanina miasa any an-trano. Ny orinasa dia nanana fifantohana lehibe amin'ny fametrahana onja ho an'ny famokarana horonan-tsary ao amin'ny rahona amin'ny 2020 NAB. Tafiditra tao amin'ny teknolojia EFS sy Flow vaovao hanohanana ny famokarana farany any amin'ny rahona miaraka amin'ny fampidirana lalindalina kokoa amin'ny fitaovana famoronana toa ny Adobe Premiere Pro ho an'ny fiaraha-miasa am-piaraha-miasa sy ny fampiharana azo ampiharina AI mba hanatsarana ireo tahiry. EFSv dia sehatra vaovao manolotra horonantsary virtoaly sy fitehirizan-tena izay lazain'ny orinasa fa manampy ny mpanjifa amin'ny famindra tsy mihetsika amin'ny alàlan'ny toeram-piasana an-premise ho amin'ny fivoarana arovana famokarana lavitra eny amin'ny rahona.
Nilaza ny orinasa fa "herin'ny EFS 2020 haingana kokoa EditShare fitehirizana fitehirizana sy tambajotra tsy hita an-tsehatra, ao anaty rahona sy ao anaty konfigurasi hibrida. Mifanaraka tanteraka amin'ny Flow 2020, ny EFS 2020 dia ahafahan'ny orinasam-pampianarana manangana arofanina fiaraha-miasa be dia be, miaro ny olona mamorona avy amin'ny fahasarotana ara-teknika ary manome marika ireo ekipa teknika miaraka amina fitaovana fitantanana media.
Scale Logic dia niresaka momba ny NAS azo ainga izay mety hiasa amin'ireo fitaovana famoahana haino aman-jery amin'ny alàlan'ny fampiasam-baovao NVMe / ZX vaovaon'ny orinasa miaraka amin'ny onboard Sync, Backup ary Archive ao amin'ny tranomboky kasety eo an-toerana na any amin'ny tranomboky ny rahona.
Orinasa maro samihafa no nanolotra tolotra mifandraika amin'ny rahona ao anatiny Masstech manolotra fanampiana ho an'ny fampidirana rahona amin'ny fofonaina ary hanamora ny fanitsiana lavitra. Ny orinasa dia nilaza fa ity vokatra ity dia mamela ny fanitsiana lavitra amin'ny alàlan'ny fitaovana iray ho an'ny fitaovana fihodinana horonan-tsarimihetsika kely, antonony sy lehibe.
Ny valan'aretina COVID dia nanafaingana ny fironana amin'ny haino aman-jery lavitra sy ny toeram-pialamboly, miaraka amin'ny fiaraha-miasa lavitra mitana ny matihanina M&E sy ny mpampiasa azy. Tsy lasa ny vokatra fitahirizana eto an-toerana fa misy misimisy kokoa ny fizarana sy famakafakana votoaty mba ahafahan'ny làlam-pandehanana lavitra. Ny fitaovana vita amin'ny rahona dia ho lasa ampahany manan-danja amin'ny tetikasan'ny fampahalalam-baovao ho avy, hampitombo ny fampiasana ny famoronana hybrid sy ny rahona ho an'ny daholobe.
Tom Coughlin, filoha, Coughlin Associates dia mpanadihady fitahirizana dizitaly ary mpanolo-tsaina momba ny fandraharahana sy ny teknolojia. Mihoatra ny 39 taona eo amin'ny indostrian'ny fitahirizana angon-drakitra miaraka amin'ny toerana misy ny injeniera sy ny fitantanana ireo orinasa maromaro. Coughlin Associates fakan-kevitra, mamoaka boky sy tsenam-barotra ary teknolojia ary mametraka ireo nomerika mifantoka amin'ny fitahirizana digital. Izy no fitahirizana tsy tapaka sy mpahatsiahy ho an'ny forbes.com ary tranokalan'ny M&E. Izy dia Mpiara-miasa amin'ny IEEE, Mpitondra ny Filohan'ny IEEE-USA ary mavitrika amin'ny SNIA ary SMPTE. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba an'i Tom Coughlin sy ireo zavatra vita an-tsoratry ny asany dia mandehana www.tomcoughlin.com.
 Ny fitahirizana nomerika amin'ny tatitra amin'ny media sy fialamboly, Coughlin Associates, 2019, tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-entertainment-report/
Previous: Ny tamba-jotra TVU dia mirotsaka amin'ny fikaonandàlana manome ny haben'ny haino aman-jery farany amin'ny fisokafan'ny habaka ara-barotra ara-tantara ataon'ny US Space Agency
Next: PSSI Vita soa aman-tsara injeniera fitaterana ny American Idol Finale